तपाईंले कोविड -१ vacc खोप लिनु पर्छ वा अस्वीकार गर्नु पर्छ यदि यो अनिवार्य भयो? के गर्ने? : मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	14 मई 2020 मा	• 45 टिप्पणिहरु
बिस्तारै, अधिक र अधिक मानिसहरूले यो देख्न थालेका छन् कि विश्वभरिका सरकारहरू समग्रमा समाजमा दिगो परिवर्तनहरू गर्न चाहन्छन्। "बौद्धिक लकडाउन" बिस्तारै स्थायीमा रूपान्तरण हुँदैछ, जहाँ तपाईंले आफ्नो स्वतन्त्रता पुन: खरीद गर्नु पर्छ। नयाँ सामान्य एक मिटर र समाजको आधा हुन्छ र तपाइँ आफैले यसको लागि तिर्नु पर्छ।
तपाइँ महँगो परामर्शदाताहरू भाडा लिन सक्नुहुनेछ कसरी सल्लाह दिनुहुन्छ डेढ मिटरमा तपाइँको कम्पनी स्थापना गर्न र तपाइँ मूल्य ट्यागमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ; तपाईको लागि मूल्य ट्याग किनकि तपाईले आफ्नो उपायहरूको लागि आधिकारिक अनुमोदन र ग्राहकको लागि मूल्य ट्याग प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ, किनकि कसैलाई त्यो कर्तव्य मिटर साढे आधा र आवाश्यक पर्ने ड्रपमा लाग्ने खाल्टो पर्दछ।
थप रूपमा, आउँदो कोभिड १ vacc भ्याक्सिन अनिवार्य हुनेछ।
एक किसिमको खोपको पूर्ण परीक्षण गरिएको छ वा छैन भन्ने प्रश्नलाई पन्छाएर समाजको डेढ मिटर उपकरण चाहिएको हो वा छैन भन्ने सवालबाट: सरकारहरू अडिग छन् र वास्तवमा आन्दोलनकारी जनतामा नजाने सुन्नुहोस्।
प्रविधि ती सबै उपायहरूको अनुगमन गर्न प्रयोग हुनेछ। मैले यो भविष्यवाणी गरिसकेको छु २०१ book मा मेरो पुस्तक र मैले पहिले नै भविष्यवाणी गरिसकेका थिए कि भर्खरका वर्षहरूमा धेरै लेखहरूमा। त्यो टेक्नोलोजी र ठूलो डाटा केवल मार्फत धक्का दिइनेछ, किनभने त्यहाँ धेरै धेरै कम्पनिहरू छन् जुन फेरि चाखलाग्दो निब्बल कमाउन सक्छन्। धेरै अहिले ठूला कम्पनीहरूका लागि काम गर्दछन् जसले आईसीटी समाधान प्रदान गर्दछ वा सरकारी एजेन्सीहरूका लागि कि उनीहरू आफ्नो घरको लागि भुक्तान गर्न जारी राख्न सक्दछन् र परिवारको देखभाल गर्दछन्। ती व्यक्तिले केहि सही छैन भनेर देख्न सक्छन्, तर जब यो छनौट गर्न को लागी आउँछ, सबै भन्दा आय ग्यारेन्टी गर्न झुकाउन छनौट।
हामी सबैलाई थाहा छ कि यो नयाँ समाज कस्तो देखिनेछ। मिडिया र राज्यले भन्ने कुरा जारी राख्छ कि बिक्री आवश्यक छ र यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका एक पछि अर्को गर्दै छ। एक पछि अर्को चरणमा, ताकि सर्वसाधारणले तिनीहरू कोरोनाभाइरस समावेश गर्न आवश्यक चरणहरू छन् भनेर विश्वास गर्न जारी राख्छन्।
प्रक्रिया तरंगहरूमा जान्छ 'बेल्ट कस' बाट 'बस लगाम वसन्त गरौं' र त्यसपछि अर्को छाल आउँछ। मिडिया, विज्ञ (आंकडाको उत्पादन) र राजनीतिले हामीलाई डेढ मिटरमा बसाई सजिलो अवधि र एक अर्को थप कोठामा बसाईएको छ, कोरोना भाइरसको पुनरुद्धारको पछि देखाउँनेछ, जस पछि मानिसहरूले प्याकेजको अर्को भाग परिचय गर्दछन्। अँगालेको हुनेछ।
वैकल्पिक मिडियामा पाठकहरू प्राय: हामी कसरी खेल्दछौं भन्ने बारेमा जानकारीको खोजीमा हुन्छन्। हामी खतरनाक खोपहरू कसरी हुन्छन् भन्ने बारे गहन विश्लेषण पढ्न चाहन्छौं, G जीले हामीलाई कसरी असर गर्न सक्छ, माइक्रोसफ्ट प्याटेन्टले हामीलाई डिजिटल भ्याक्सिन प्रमाणपत्र कसरी दिन्छ, बिल गेट्सले कसरी मिडिया र भ्याक्सिन उद्योगमा लगानी गर्छ, कसरी अनुप्रयोगहरू हामीलाई मद्दत गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ निगरानी गर्न। हामी कसरी वेबमा चल्दैछौं भन्ने बारे जानकारीको लागि हामी भोकाएका छौँ जसले गर्दा हामी अरूलाई कसरी हल्लाउन सक्दछ जुन हाम्रो बाटोमा आउँदैछ।
त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यदि तपाईलाई के खतरा तपाईले हतारिरहेको छ भन्ने थाहा छैन भने, तपाई समयमै पछाडि उफ्रिनुहुन्न। जहाँसम्म, अर्को चरण हुनुपर्दछ। हामी समाधानको साथ आउनु पर्छ।
यहाँ वेबसाइटमा तपाईंले धेरै लेखहरू पढ्नुभयो जुन हामी कसरी सम्भावित समाजमा जान्छौं जहाँ अधिक नगद छैन, एउटा समाज जसमा अनुप्रयोगहरू, क्यामेराहरू र ठूला डाटालाई हामी कहाँ छौं वा हामीसँग ठीक तापमान छ कि छैन भनेर थाहा छ (कुनै कोविड- १)) र जसको साथ हामी सबै कुराकानी गर्छौं। अर्को चरण भनेको यो सबै डाटालाई स्कोर प्रणालीको क्रममा लिंक गर्नु हो। पर्याप्त स्कोरको साथ वा बिना, रेल वा विमानमा बाहिर जान सक्छ वा हुन सक्दैन। हामी सबै अब यो भविष्यवाणी गर्न सक्छौं। सम्भावित डिजिटल मार्कमा त्यो सबै डाटाको लिंक र तपाईंको डिजिटल बैंक ब्यालेन्समा लिंकले कथा पूरा गर्दछ।
हामी एक वेब मा संचालित भइरहेको छ र चीन एक राज्य को रूप मा तपाईं कसरी मान्छे यसलाई पालन गर्न बाध्य गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने उदाहरण प्रदान गर्दैछ। चीनले विपक्षमा उभिएको व्यक्तिलाई कसरी सहजै छोडिन्छ भनेर देखाउँदछ। त्यो त्यस्तो प्रणालीको स्वचालित प्रभाव हो। अन्ततः जनताले यस अघि झुक्नेछ, आंशिक रूपमा किनकि समाजमा आफैंले 'प्रणाली' को भागका लागि काम गर्दछन्। यदि तपाईं आईसीटी मा काम छ र तपाईं डाटाबेस सफ्टवेयर आपूर्ति वा तपाईं क्यामेरा प्रणाली आपूर्ति, यदि तपाईं एक अन्वेषण अधिकारी वा एक पुलिस अधिकारी को रूप मा काम, तपाईं अझै पनि आफ्नो आय छनौट। यो यो कसरी जान्छ।
यो भन्नु भ्रम हो, "त्यसो भए म मेरो स्मार्टफोन टाढा फाँट्छु ताकि म प्रणालीबाट बाहिर जान्छु"। हामी यस्तो समयमा जाँदैछौं जहाँ समाजमा सहभागिता व्यावहारिक रूपमा असम्भव बन्छ डिजीडी बिना वा ई-हिर्निंग (कम्पनीहरूका लागि) बिना। नयाँ कोरोना टेक्नोलोजीको साथ पनि त्यस्तै हुनेछ। यदि तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोन टाढा फाल्नु भयो भने, तपाईं अब सुपरमार्केटमा प्रवेश गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
यो कि आउँछ? चरण-चरण यो सम्भवतः त्यसमा आउनेछ। र त्यसोभए तपाईं मात्र बाँच्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंसँग आफ्नै बाँडफाँड बगैचा छ, तर त्यसो भए तपाईं आफैले यसको बीज पनि लिन पर्छ, किनकि त्यो आत्मनिर्भरता सायद दीर्घकालीनमा पनि निषेधित हुनेछ।
अर्को चरण यो हुनेछ कि तपाईलाई अब सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अनुमति छैन यदि तपाईसँग खोप छैन भने। र ठूलो डाटा पनि यस मा एक भूमिका खेल्नेछ। यदि तपाईंको अनुप्रयोगले तपाईंलाई खोप प्राप्त गर्यो भने, सुपरमार्केट प्रवेश द्वारले तपाईंलाई भित्र छोड्नेछ; अन्यथा छैन। अन्तिम चरणमा, त्यस्ता अनुप्रयोगलाई सायद एक डिजिटल विशेषताले प्रतिस्थापन गर्ने छ जुन तपाइँको शरीरसँग जोडिएको छ। र यो मात्र पूर्ण हुन्छ यदि तपाईंको बैंक ब्यालेन्स पनि यी सबैमा लिंक गरिएको छ। चाँडै नै उम्कने छैन जब सम्म तपाईं 'जंगली मा' बाँच्न छनौट गर्नुहोस्, तर धेरैको लागि त्यो पुल धेरै टाढा हुनेछ।
हामी के चाहन्छौं भनेर चिच्याउन सक्छौं; हामी चिच्याउन सक्छौं कि हामी यो सबै चाहँदैनौं, तर यो मरुभूमिमा कराएको जस्तै छ। बहुमत 'प्रणाली' मा निर्भर गर्दछ। यसैले सोच्न को लागी समय आयो: यदि तपाइँ 'Em लाई हराउन सक्नुहुन्न, Em' मा सामेल हुनुहोस्।
हामी ठोस समाधानको साथ आउनै पर्छ जुन 'प्रणाली' को लागी काम गर्नेहरूले पनि अँगाल्न सक्छन्। हामीले ठोस र सम्भाव्य समाधानहरूको साथ आउनुपर्दछ जसले सुनिश्चित गर्दछ कि व्यक्तिले निश्चितताहरू गुमाउँदैनन्, तर उनीहरूको भनाइ छ। हामी अब माथिबाट लगाइएको निर्णयहरूमा पूर्ण निर्भर छौं। वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको सहभागिता बिना ती निर्णयहरू स्वीकार गर्न बाध्य पार्छ। यो फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यो फरक हुनुपर्दछ।
त्यहाँ एक मौका छ! जे भए पनि, त्यहाँ आजकल समान प्रविधिको साथ चीजहरूलाई आमूल मोड्ने अवसर छ, यस बिना सम्पूर्ण समाजलाई उल्टो पार्नु। यसको लागि प्रमुख लोकप्रिय विद्रोह वा क्रान्ति आवश्यक छैन। सबैजना बस के गर्न जारी राख्न सक्छन्।
एक मात्र कुरा परिवर्तन हुन्छ कि निर्णय संरचना। मन्त्रीहरू र अधिकारीहरू जसले अब मुकुटमा रिपोर्ट गरिरहेका छन् र जनताको तत्काल स्वीकृति बिना कानून मार्फत दबाव दिइरहेका छन् जनतालाई रिपोर्ट गर्नु पर्छ। मन्त्रीहरू जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिनु पर्छ (जसले मुकुटको सट्टा जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ)।
यी सबै प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको सिद्धान्त मार्फत सम्भव छ। त्यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा तपाईले आफ्ना प्रतिनिधिहरू अनलाइन छनौट गर्नुभयो। तपाईं आफै उम्मेद्वार बन्न सक्नुहुन्छ वा वर्तमान उम्मेदवारहरू र मतदान प्रणालीले छनौट र समर्थनमा वृद्धि सुनिश्चित गर्दछ। यो थोरै हल्यान्डको गट ट्यालेन्ट र अन्य टिभी कार्यक्रमहरू जस्तै मतदान प्रणाली जस्ता छ। प्रविधि त्यहाँ छ, सम्भावनाहरू छन् र यसले काम गर्दछ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले कानूनहरू सरलीकृत गर्नुपर्दछ र उनीहरूलाई अनुमोदन वा समीक्षाका लागि मानिसहरूसामु प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। हजारौं कानूनबाट, स्पष्टतामा, मात्राबाट गुणस्तरमा। प्रत्यक्ष सार्वजनिक सहभागिता।
अनिवार्य खोप कानूनहरूले हामीलाई खोप लिन वा जेल जान छनौट गर्न अनुमति नगरुन्जेल हामी पर्खाई गर्न सक्दछौं, वा हामीले यो गति लिन सक्दछौं। परिवर्तन ल्याउनको लागि हामीले यो स se्कटको प्रयोग गर्नुपर्दछ। हामीले चाहेको तरिका बदल्नुहोस्! प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले केही महिना भित्र अनलाइन मतदान प्रणाली मार्फत अवस्थित शक्ति संरचना बदल्न सक्छ।
अब यसको लागि समर्थन सिर्जना गर्ने समय हो। अवसरमा आफैलाई डुबाउनुहोस्, यसको बारेमा सोच्नुहोस् र यो कसरी कार्य गर्दछ पढ्नुहोस्। यो काम गर्ने र परिवर्तन हुने समय हो। अधिक जानकारीको लागि बटन थिच्नुहोस् र याचिकामा हस्ताक्षर गर्नुहोस्।
के तपाईं आफ्नो डीएनए अनुकूलन गर्न को लागी टेक्निकल प्रयोग गर्न सकिन्छ?
ट्याग: भन्दा, अनुप्रयोगहरू, ठूलो, Covid-19, डाटा, लोकतान्त्रिक, प्रत्यक्ष, er, विशेष, fvvd, हुन्छ, म इन्कार गर्छु, अनलाइन, मतदान गर्नुहोस्, प्रविधि, टीका, टीकाकरण, खोप दायित्व, प्रतिबद्धता, wat, अस्वीकार, इन्कार, कानून
14 मई 2020 मा 12: 22
एक नेता बन्नुहोस्
14 मई 2020 मा 13: 16
तर यो मार्टिन स्वतन्त्र छ, जान पिटर एक अग्रगामी भूमिका खेल्छ
पूर्व प्रधानमन्त्री बाल्कनन्दे सबैको लागि नि: शुल्क कोरोना खोप चाहन्छ
14 मई 2020 मा 13: 26
ओह खुशी, राम्रो छ त्यसोभए चिन्ताको विषय त्यहाँ छैन।
मुक्त = कर भाँडाबाट र यसैले अन्ततः कर वृद्धि मार्फत = निशुल्क
17 मई 2020 मा 15: 23
ग्यारेन्टी छ कि यो मदुरोडममा आउँदैछ, चाँडै यदि सामूहिक बिछाउनाहरू यो प्लन्डिमिकको कारण हुन् भने, चुच्चोको दाग बुबाको लागि हो। फोहोर काम गर्न पर्याप्त imbers ...
माइकल गोभले १ 17,000,००० भन्दा बढी कोरोनाभाइरस सम्पर्क ट्रेसर भर्ती गरिएको बताएका छन - केवल १ target,००० लक्ष्यको लाजमर्दो - उनीहरू दावी गर्दछन् कि ती केवल शुरुआती तीन महिनाको लागि राखिएका छन्।
14 मई 2020 मा 13: 23
कोविड, त्यसकारण खोप ID को प्रमाणपत्रको प्रमाण हो (२०२०)
14 मई 2020 मा 13: 33
तिनीहरूलाई औंला दिनुहोस् 🖕, होइन भन्नुहोस्
14 मई 2020 मा 14: 41
कोभिड पछाडि १ को मतलब एआई हो, यदि तपाईं अक्षरहरूलाई संख्यामा अनुवाद गर्नुहुन्छ भने। त्यसैले खोप पहचान परिचय कृत्रिम खुफिया को प्रमाणपत्र।
हामी अनुमान लगाउन सक्छौं कि सबै चोरी डेटा अन्त कहाँ, Palantir प्रणाली को पाठ्यक्रम मा! ट्र्याक र ट्रेस
14 मई 2020 मा 15: 33
@riffian ठीक !!! एआई लाई डेटा खुवाउन आवश्यक छ, ओह यो चोरी भएको छ हो!
हामीलाई ठूलो NHS COVID डाटा डिलको बारेमा तत्काल उत्तरहरू चाहिन्छ
युके सरकारले युएस टेक दिग्गजमा आफ्नो 'अभूतपूर्व' डाटा ट्रान्सफरको विवरण जारी गर्न किन इन्कार गरिरहेको छ? यदि हामी जवाफहरू प्राप्त गर्दैनौं भने हामी तिनीहरूलाई अदालतमा खोज्न सक्छौं।
14 मई 2020 मा 14: 58
राम्रो भिडियो, विशेष गरी पछिल्लो I AM को साथ समाप्त हुन्छ, पढ्नको उद्देश्य हो, लक्ष्य हो। बदमाशहरूले प्रायः शब्दहरू बदल्छन्।
यहाँ फेरि नयाँ पाठकहरु को लागी। भाग्यवस, अधिक र अधिक थपिएको छ। मान्छेहरूले पनि चन्दा दिन्छ जुन मार्टिनलाई बिट केही मद्दत गर्दछ। उसको आवाज स्पष्ट रूपमा विश्वसनीय र बुद्धिमान छ। तपाईं यो कहिँ पढनुहुन्न। उसको साइट हावामा राख्नु पर्छ। Ddos आक्रमणको बारेमा उनको साइटमा उनको साइट हेर्नुहोस्
त्यो जेन्सेन of 33 को हटाइएको भिडियो भन्दा धेरै नै प्रगाढ छ। अवश्य पनि, जसलाई Yt ले सहमति दिए। उसको शर्ट बिक्रीको साथ, र भन्नुहोस् यो सबै ठीक हुन्छ। ऊ भेन्डेलपार्कमा बस्छ, त्यसैले पानी जस्तै पैसा छ। म मेरो केसमा आराम गर्छु।
जेनसेनले आफ्नो घाँटीमा सिपाहीको जुत्ताको बारेमा कत्ति पटक कुरा गर्दछन् याद गर्नुहोस्।
र यहाँ फेरि रिमाइन्डर किन तपाई निश्चित रूपमा शट लिनु हुँदैन। यदि तपाईं यस साइट मा यहाँ जस्तै सिक्न, र तपाईं केहि नम्बर ज्ञान प्राप्त। के तपाईंलाई थाहा छ यी नम्बरहरूमा उल्लेख गरिएका सबै कुरा तपाईंले विश्वास गर्नु हुँदैन वा गर्नु हुँदैन। र निश्चित रूपमा यसलाई तपाईंको शरीरमा प्रवेश गर्न नदिनुहोस्।
14 मई 2020 मा 18: 34
सहमत मार्टिनले लेखेका र प्रस्ताव गरेका सबै कुरा फेला पार्न सक्दैनन्, कहिलेकाँहि यसलाई अत्यन्त चरम वा अवास्तविक पनि भेट्टाउँछन्, तर आफ्नो अद्वितीय आवाजको साथ उनी नेदरल्याण्ड्समा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वतन्त्रता कोइला खानीमा रहेको उखान हो। यस साइट यसैले माथि रहिरहनु पर्छ, र वास्तवमै: अधिक आगन्तुक र समर्थकहरू उत्तम।
म माथिको लेखसँग सहमत हुन सक्छु, तर म अझै पनि विश्वास गर्दछु कि प्रस्तावित परिवर्तन लामो समयको अवधिमा फैलिनु पर्छ (यदि तपाईं सकेसम्म धेरै मानिसलाई लिन चाहानुहुन्छ, र अन्य देशहरूमा पनि)। व्यक्तिलाई पहिले त्यस्तो कठोर पालोको लागि 'पाकेको' बनाउनु पर्छ। अन्यथा, धेरै आतंकित हुनेछन्, तपाईं हिंसा, अराजकता, दुख, र अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
Wmb कसैसँग तुलना गर्नुहोस् जसको खुट्टा स्वीडेनको जाडोमा -30० डिग्री मा स्थिर छ। यदि तपाईंले यसलाई तुरून्त तातो नुहाउँनुभयो भने तपाईंले क्षतिलाई अपूरणीय बनाउनु हुनेछ। यो धेरै क्रमिक हुनुपर्दछ, र त्यसैले यो धेरै जसो मानिसहरूसँग हुन्छ। उनीहरूलाई यो गर्न १० बर्ष दिनुहोस् (यद्यपि मलाई डर छ कि हामीसँग हालको मार्शल कानूनलाई स्थायी पुलिस राज्य बन्न रोक्नको लागि १० बर्ष छैन)।
14 मई 2020 मा 20: 33
मैले 'अवास्तविक' र 'चरम' को धेरै अनुपयुक्त को कन्सिडसेन्डिंग टोन फेला पारेको छु। यदि एक पार्टी अवास्तविक र अत्यन्त व्यस्त छ भने, यो वर्तमान लॉकडाउन सरकार हो।
यो त्यस्तो होइन कि त्यहाँ Xender को राय साइट मा एक गेज को गणना गरीन्छ र हामी तपाईको भगवान X को आत्म-धर्मी निर्णय मा भरोसा गर्दैछौं। यस प्रकारको आलोचना छोड्ने र कार्य लिने समय भएको छ। गरेर परिवर्तन हुनुहोस्।
म दृढ विश्वास गर्दछु कि fvvd.nl मा प्रस्तावित नयाँ प्रणाली केहि महिनामा नै स्थापित गर्नुपर्नेछ। हामीसँग बर्बाद हुने समय छैन।
म तपाईंको टिप्पणीहरुलाई कडाइका साथ अस्वीकार गर्छु। यदि हामी केहि महिना पर्खौं भने, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले सम्पूर्ण समाजलाई डेढ मिटरको समाजमा रूपान्तरण गरेको छ र सबै प्रकारका प्राविधिक साधनहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ जसले हामीलाई एक सर्ववादी नियंत्रण वेबमा राख्छ।
यसैले म भन्छु: यसलाई लामो ट्र्याकमा नराख्नुहोस् र यसलाई चरम र अवास्तविकको रूपमा खारेज नगर्नुहोस्। यो चरम र अवास्तविक छ कि हामी गुनासो र लेख लेखिरहन्छौं जहाँ यो सबै गलत हुन्छ र खोपहरू र डिजिटल प्रमाणपत्रहरूले हामीलाई नोक्सान गर्न सक्दछन्।
यो मान्छेको परिपक्वतामा राख्नु डरपोक छ। व्यक्तिहरू यी तालाबन्दीका लागि पनि तयार छैनन् र अब हामी देख्छौं कि सरकारले केही हप्तामा 'अव्यावहारिक' र 'चरम' उपायहरू गरिरहेको छ।
त्यसैले मँ भन्छु कि तपाईको आलोचना को लागी कुनै कडा शब्दहरु संग छैन र सुझाव छ कि तपाईले मानिसहरूलाई बोलाउनु भयो अहिले नै कार्य लिनुहोस्। यो १ मिनेट १२ सम्म हो र हामी १० बर्ष प्रतिक्षा गर्न सक्दैनौं।
तपाइँ साइट को प्रश्न र उत्तर अनुभाग मा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ: https://www.fvvd.nl/qa/
14 मई 2020 मा 22: 14
15 मई 2020 मा 07: 03
कोमल रोगका दुर्गन्धित चोटहरू बनाउँछ ...
व्यक्तिहरू हल्लाउनु आवश्यक छ, तर तिनीहरू कोमामा देखिन्छन्।
15 मई 2020 मा 16: 01
मँ Xender लाई तपाईको प्रतिक्रिया एकदमै स्वच्छ पनि पाउँदछ किनकि मलाई धेरै कडा शंका छ कि Xender एक disinformant हो। म त्यो व्याख्या गर्न जाँदैछु। नियमित पाठकलाई मेरो अर्थ के हो भनेर थाहा हुन सक्छ।
14 मई 2020 मा 13: 37
14 मई 2020 मा 15: 01
यो अनौठो हो कि मैले त्यो क्लिप कहिल्यै देखेको छैन, टिभी पढेको छैन र सीडी खरानी भयो। क्लिप गर्न वास्तवमै धेरै अस्पष्ट। र यो ब्यान्डको त्यो संगीतको केवल फ्यान पनि हो। पुराना दिनहरूमा।
14 मई 2020 मा 13: 56
अधिक भविष्यवाणी गर्ने प्रोग्रामिंग, लिपि पहिले नै डेड जोन - PLAGUE श्रृंखला मा २०० incor मा समावेश गरीएको थियो
14 मई 2020 मा 15: 47
महत्त्वपूर्ण क्लिप आईड त्यहाँ कोरोना (ra33oon) को बारे मा कुरा पनि छ, १ 1993 XNUMX from देखि सामान्य श suspect्कास्पद डग्लसको साथ झर्नु तपाईंको अनुहारमा फरक थियो।
दशौं लाखौं मानिसहरूलाई अब आवश्यक पर्दैन।
14 मई 2020 मा 14: 06
मध्यम वर्ग / वर्ग कमसेकम एक बर्षको लागि पूर्ण रूपमा वित्तीय निचोड हुनेछ, ताकि तिनीहरू चाँडै नै भेडाझैं गरी फादर स्टेटमा हस्तान्तरण हुनेछन्।
14 मई 2020 मा 15: 09
हो हो। यस तरीकाले सबै पूर्ण रूपमा निर्भर हुन्छन्। आलोचनात्मक रूपमा अब सोच्दैन किनकि यो बचत भएको छ। केवल यस्तो तरिकाले बचत गरियो कि मलाई लाग्छ तपाईं स्वर्ग अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसोभए तपाईंको उद्धारकर्ता पनि एक हो जसले तपाईंलाई र तपाईंको परिवारलाई जान्नका लागि त्यो तखतामा धकेल्नुभयो। तर तिनीहरूले सुरुमा यो फरक तरीकाले देख्नेछन्। यो धेरै ढिलो सम्म, सबै पछि, भ्याक्सिनहरू जे भए पनि अमेरिका मा untested मानव मा इंजेक्शन गर्न सकिन्छ। सामान्य संदिग्धहरूबाट आएका, र आफैंको लागि प्रतिरक्षाको व्यवस्था गरेका छन्। यस खोपले तपाइँलाई कुनै पनि हिसाबले हानी गर्दछ। त्यो व्यवस्था वास्तवमा सम्पूर्ण कथा बताउँछ।
14 मई 2020 मा 15: 28
यहाँ भेडाको लुगामा रहेको अर्को ब्वाँसी एरिक श्मिट, सबै सामान्य संदिग्ध व्यक्तिहरू यस अन्तिम दासत्व अभियानमा संलग्न छन्। र तिनीहरू व्यस्त हुँदा उनीहरूको एजेन्डामा हावापानी चकना पनि समावेश गर्दछ
सोरोस र गेट्स द्वारा वित्त पोषित, ट्र्यासींग समूहलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, बोर्डमा चेल्सी क्लिन्टन छ
'हामीले विशाल कर्पोरेसनहरूको लागि' आभारी 'हुनुपर्दछ जुन' व्यक्ति खराब गर्न मन पराउँछन् '(हामी यसलाई FASCISM भन्छौं)
भिडियो लुकाइएको छ, ठीक उनीहरू कसरी सञ्चालन गर्छन्।
14 मई 2020 मा 15: 37
https://www.cbsnews.com/news/trump-economic-club-speech-live-stream-president-trump-at-the-new-york-economic-club-today-2019-11-12/ (ट्रम्प समस्याको हिस्सा हो, क्यू बुल्शिट बिर्सनुहोस् !! योजनामा ​​विश्वास गर्नुहोस्, उनीहरूको योजना हो)
14 मई 2020 मा 17: 20
ट्रम्प खोपको पक्षमा छन्, हेर्नुहोस् Q Q ले यसको प्रतिक्रिया कसरी गर्दछ।
15 मई 2020 मा 16: 41
प्रकाशित: ट्रम्पको महामारीको 'योजना' जुन प्रेस सेक्रेटरीले पत्रकारलाई लत्याए उनलाई युद्धपन्थी प्रतिवेदनमा बुझाईयो - जसमा चिकित्सा आपूर्ति अभाव, अपर्याप्त रकम र संघीय भ्रमको प्रकोपको केही महिना अघि चेतावनी दिइएको थियो।
20 मई 2020 मा 18: 50
14 मई 2020 मा 15: 46
उनीहरूले त्यो खेल कति चलाखीपूर्वक खेल्छन् हेर्नुहोस्। तिनीहरू भर्खर शाब्दिक रूपमा के गर्छन् तिनीहरू देखाउँछन्। परिवारबाट बच्चाहरू पढ्नुहोस्। स्वास्थ्यको आडमा, र किनकि तपाईंसँग क्वारेन्टाइनका लागि २ बाथरूम छैन। तर कसैले यसको बारेमा सोच्नुहोस् कि यसको विरुद्धमा को छ। र धेरै खराब अभिनय प्रदान गर्दछ। तर तपाईंसँग एक नम्बर टेक्स्ट गरिएको छ, तथा एक-अर्कामा हेर्न यो भनिन्छ। र त्यसैले तिनीहरूसँग तपाईंको सम्पर्क ट्रेसिंग नम्बर छ। हो हो तपाईंको बच्चाले तपाईलाई फेरि कहिले पनि देख्ने छैनन्, र यो कोविडबाट मर्दैन। 2०१२80123, and र read9पढ्नुहोस्। र तपाईसँग भएको सबै फाल्नुहोस्। अमेरिका बनाउनुहोस् …… .. राम्रो छ
केवल अभिनेता को लागी हेर्नुहोस्, र तपाईले तिनीहरू के प्रवेश गरिरहनु भएको देख्नुहुनेछ।
14 मई 2020 मा 16: 31
नयाँ विश्व अर्डर गर्न प्रतिबद्धता
14 मई 2020 मा 21: 56
15 मई 2020 मा 03: 25
जो कोहीले आफ्नो जीवनमा भोट हालेको छ यस याचिकामा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ। हामी अब स्पष्टसँग देख्न सक्छौं कि के हुन्छ जब तपाईं टेलिभिजन कठपुतलीहरूलाई तपाईंको जीवनमा शासन गर्न दिनुहुन्छ। यदि केवल ध्यान प्राप्त गर्न को लागी कि यो एक झूट मा आधारित छ, यस लेख मा पढिएको रूपमा। फेरि मतदानले हामीलाई अझ पनी लकडाउनमा लग्यो।
म निश्चित रूपमा चिप वा खोप लिने छैन, तर प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जे भए पनि, हामीले आफूलाई पत्ता लगाउन प्रकृतिमा फर्कनु पर्छ। येशू पनि जडान गर्न मरुभूमिमा जानु पर्थ्यो। म यसो भन्दिन कि तपाईंले येशूमा विश्वास गर्नु पर्छ, म भन्दैछु कि हामी उही मार्गमा छौं।
15 मई 2020 मा 06: 30
राम्रो छ कि अझै पनि यस जर्मन डाक्टर जस्ता चिकित्सकहरू छन् https://www.youtube.com/watch?v=6bIAXtciwk0&feature=youtu.be
15 मई 2020 मा 06: 59
अघिल्लो लिंकमा जर्मन डाक्टरको भिडियोमा उनी भन्छिन् कि यो एकदम सत्य हो। हामीले आफ्नो "पुरानो सामान्य" मा फर्किनु हुँदैन भनेर भन्दै शिरामा। यो यति सत्य छ, किनकि यसको मतलब यो हो कि पुरानो सामान्यतया यसलाई हामी हालको अवस्थामा चलाउन सम्भव बनाएको छ। त्यसोभए त्यहाँ एक नयाँ सामान्य आवश्यकता छ, जुन १. meter मिटरको समाजमा सबै सर्भेल्यान्स टेक्निकहरू छैनन्, तर नयाँ सामान्य जुन धेरै हदसम्म मार्टिनको एफभीभीडीको बिन्दुसँग मिल्छ। हुनसक्छ यो FVVD को सन्देशमा समावेश गर्न सकिन्छ?
15 मई 2020 मा 09: 48
मलाई विश्वास छ कि मार्टिनको सन्देश बिल्कुल स्पष्ट छ!
15 मई 2020 मा 08: 18
कमसेकम मेरो लागि "जंगलीमा"। हामी पूर्ण पोलिटेट राज्य हुने बित्तिकै म मेरा चीजहरू प्याक गर्दछु र म गइसक्छु। बरु म कतै कतै बीचमा मृत्युको लागि भोको छु मेरो स्वतन्त्रता नलिन दिनुहोस्।
15 मई 2020 मा 09: 47
मलाई लाग्दैन कि पूर्ण पुलिस राज्य भएको बखत तपाईं जान सक्नुहुन्छ। पुलिस राज्य = सामन्ती प्रणाली, तपाईं राज्यको भाग हो। सामन्ती प्रणालीमा दासले मालिक / राज्यको अनुमति बिना केहि गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन।
यसबाहेक, तपाईं जहाँ जान चाहानुहुन्छ सबै अन्तर्राष्ट्रिय जडान, समन्वय र तिनीहरू द्वारा नियन्त्रित छ। मलाई आश्चर्य छ यदि तपाईं जान चाहानु भएको मानिसहरू तपाईंलाई पर्खिरहेका छन् भने। व्यक्तिहरु बीच प्रतिस्पर्धा पनि छ। हामी गाह्रो अवस्थामा छौं र त्यसैले हामी आफैले यहाँ मदुरोडममा समाधान गर्नुपर्नेछ। सामान्य जनसंख्या अझै पनी यसलाई अनन्त निष्क्रिय ढिलाइका साथ बुझ्दैन।
16 मई 2020 मा 10: 51
यहाँ मार्टिन तपाईं त्यो सबै गडबडी, र विशेष गरी chimeric प्रभावको बारेमा सही हुनुहुन्छ।
र तलको टुक्रा फ्रिमासन्स र उनीहरूको न्यूजपीकको शिक्षाबाट हो। अर्को शब्दहरुमा हामी धेरै छिटो प्रतिक्रिया गर्न को लागी छ। त्यसोभए कसैले के लेबलको टेक्स्टबाट बाहिर निकाल्न सक्छ कि तपाई हेर्नुहोस्। त्यसोभए जीवनलाई जोखिममा पार्ने सामानहरू, र सरल शब्दमा भन्ने हो भने, तिनीहरू तपाईंलाई मार्न चाहन्छन्, र आफ्नै लागि नयाँ संसार सिर्जना गर्दछन्। कसरी नरक यति धेरै मानिसहरू यस सिद्धान्त मा सामेल छन्।
Induvidual एक षड्यन्त्रको साथ आमने सामने आएर विकलांग छ।
त्यसैले राक्षस ऊ विश्वास गर्न सक्दैन यो उत्साहित छ।
सदोमाइट, पेडोफिल, Free 33 फ्रिमासन। जे एडगर हूवर
एफबीआई निर्देशक, कस्तो षडयन्त्र?
उनले खोप निर्माता गिलियडको पनि कुरा गरे। के हिब्रू मा Galeed को अर्थ हो।
साक्षीको ढेर पढ्नुहोस्, हेब्र्यूमा गालिदको बराबरको कल्डी नाम। दुबै करारको दृश्य चिह्नित गर्दै। याकूब र लबान जेन 31१:47 बीच (यो उनीहरूले पछ्याईरहेका छन् भनेर संकेत गर्नु हो, कसैलाई बाइबलमा नलिनको लागि)
पोप फ्रान्सिस विश्वकोशियाना Laudato si (शिक्षण कागज) मा billion अरब मान्छे मार्न माग्दछ।
विवरण हेर्नुहोस्: र तिनीहरू स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन्। ट्रम्प पनि सेना मा सबैलाई खोप दिन बोलाए, मृत पढ्न। र अमेरिका, यसको हातमा million० करोड निजी हतियारसहित, शान्त छ। अनौंठो कि तपाई कन्डिशन्ड हुन सक्नुहुन्छ। र म हिंसाको वकालत गर्दिन। तर सामान्य संदिग्धहरूले पक्कै गर्छन्।
17 मई 2020 मा 12: 21
म ती परीक्षणहरू पनि अस्वीकार गर्दछु, किनकि तिनीहरूले DNA डाटाबेस पनि भर्न सक्छन्। डाई स्किपर्स अब DSM मा छन् र DSM सिजबेस्मा को पूर्व प्रमुख अब परीक्षणको लागि जिम्मेवार छ। हेयरहरू चालु हेर्नुहोस्, सामान्य संदिग्ध दुबै तिर खेल्छन्, उठ्नुहोस् !!
कुर्सी नाच पूरा भयो
17 मई 2020 मा 18: 21
कि त्यो अझै साथीहरु को एक सर्कल छ, घृणित ... ... यो पनि महान छ कि यो १ 13.33..XNUMX मिनेटमा हामीलाई स्पष्ट पारियो। यो स How्कट कत्तिको रमाईलो छ यसका साथ सम्भव छ। र दासहरु कती मीठो छ। दुर्भाग्यवस, दासहरू प्रायः अन्तस्करणको हुन्छन्। ती सबै कलाकारहरूको बारेमा भन्न सक्दैन।
17 मई 2020 मा 14: 29
फ्लुको हल्का रूपको लागि पर्याप्त औषधिहरू छन् भने किन खोप?
डब्ल्यूएचओले विषाक्त COVID-१ C Cure लाई $ २०M ri घूस प्रदान गर्‍यो - मडागास्कर राष्ट्रपति
GreatGameIndia द्वारा - मे १,, २०२०
एउटा आश्चर्यजनक घटनामा मेडागास्करका राष्ट्रपतिले सनसनीखेज दाबी गरेका छन् कि डब्ल्यूएचओले कोभिड १ cure लाई विषाक्त बनाउन २० मिलियन डलर घूस दिएको थियो। आर्टेमिसियाबाट बनेको COVID-१ Organ Organics भन्ने जडीबुटी उपचारले कोभिड १ patients बिरामीलाई दस दिनभित्र निको पार्न सक्छ, राष्ट्रपतिले भने।
18 मई 2020 मा 13: 33
नाइजेरियामा घूसको आरोप लागेपछि बिली बाख्राको फाउन्डेशन बग्गीको काँचमुनि रहेको छ, बुरुन्डी र तन्जानियाले डब्ल्यूएचओ / मेलिंडा र बिल तत्व निकालेका छन्। त्यसोभए यो पनि सम्भव छ, हामी यहाँ उदाहरण लिन सक्छौं।
18 मई 2020 मा 18: 05
म BMF मा चकित हुन जारी छ। र विशेष गरी त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले उनीहरूको दाँत र नail रक्षा गर्छन्। किनकि उसले परोपकारहरूलाई यति धेरै दिन्छ। जबकि उसले कम्तिमा %०% लगानीमा फिर्ता गर्छ। यदि बिल साँच्चिकै राम्रो छ भने, उनी र उनका धनी साथीहरूले संसारलाई लामो समयसम्म भोक र प्यासबाट बचाउन सक्थे। आफ्नो विश्वव्यापी परीक्षण मैदानमा विभाजन र नियम खेल्नुको सट्टा। कि उहाँ गर्नुहुन्न, र मानिसहरुलाई परिक्षा जनावरको रुपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। व्यक्ति अझै पनि बाहिर उभिनु पर्छ। तिनीहरूसँग यति धेरै पैसा छन्, एक हप्तामा विश्वका सबै समस्याहरू समाधान गर्न। कुनै भोकाउने छैन, तिर्खाउनु पर्दैन, युद्ध भन्दा कम बाल मृत्युदर इत्यादि इत्यादि। तर तिनीहरू त्यसो गर्दैनन, सम्पूर्ण बीएमएफको बारेमा केही राम्रो छैन। दुर्भाग्यवस सबैभन्दा बढी पैसाको साथ सबैभन्दा कम प्रकारको दोहोरो।
20 मई 2020 मा 08: 46
20 मई 2020 मा 10: 46
20 मई 2020 मा 13: 42
23 मई 2020 मा 15: 43
« कोरोना स during्कटकालको समयमा पैसाको ठूलो मूल्यह्रासले हाइपरइन्फ्लेसन निम्त्याउँछ: बिटकइनको समाधान हो?
सरकारी मामिलाहरूको बिरुद्ध जोर्डि Zwarts टन मा एling्गल छ, तर केहि प्राप्त छैन »
कुल भ्रमण: 2.484.057
SalmonInClick op कोरोना क्रिसिस कोविड -१ 19 २०० MS एमएस ब्लास्टर भाइरस बिल गेट्स अभिनीत याद ताजा गरीरहेको छ
अमालेक op आईफोनले भर्खरको आई-ओएस १.19..13.5 अपडेटमा कोविड १-अनुप्रयोग लुकाउँछ
SalmonInClick op कति डच मानिस अझै पनी आफ्नो बिल भुक्तान गर्न सक्छन् कोरोना संकटको समयमा?